Nwa Atụrụ atụrụ (Irish Stew) - Ezi Ntụziaka
starbucks utu swirl paụnd achicha uzommeputa
parmesan ọkụkọ na spaghetti skwọsh uzommeputa
kedu ụdị agwa na-aga na chili
esi esi nri Pizza bagels na oven
ugboro abụọ butere poteto ngwa ndakwa nri na oven
Nwa Atụrụ atụrụ (Irish Stew)
Nwa atụrụ atụrụ bụ ihe na-atọ ụtọ ma na-enye afọ ojuju nke nwere anụ nro, poteto na karọt. Oge opupu ihe ubi bu oge ichopu omenala nile nke ezumike na opupu ihe obula Stew Irish .
Anyị na-enwe mmasị ijere ụdị nri atụrụ a na-esi n'ụlọ atụrụ n'akụkụ ụfọdụ bred soda .
Ọ bụrụ na-amasị gị ezigbo ọdịnala Nri anụ ehi , ị ga-ahụ ụtọ stew Irish a na-atọ ụtọ dịka ọ dị! Nchikota karọt, poteto, eyịm, (nke enwere ike iji ụdị anụ ọ bụla mee) na-eri na broth Guinness.
Ezigbo ndị enyi m Lew & Val nyeere m aka imezigharị usoro a ma ọ bụrụ na onye ọ bụla maara ezigbo nri Irish, ha na-eme ya! A ma ama ndị Irish maka ụdị nri ha na-eri, igwe mmadụ na-atọ ụtọ ma ha mara otu esi eme ka ọ dị mfe!
Kedu ụdị nwa atụrụ maka stew? A kwadebere Nwa Atụrụ A Irish a na ubu atụrụ, nke bụ akụkụ kachasị nro nke nwa atụrụ nke nwere ekpomeekpo mara mma nke na-eme ka ahịhịa thyme dị ụtọ! Niile ị chọrọ bụ a arọ stockpot, ọhụrụ atụrụ ubu iberibe na a obere nhọrọ nke mgbọrọgwụ inine & herbs.
Olee otú Iji Mee Nwa atụrụ atụrụ?
Were nwayọ jiri nwa atụrụ na aja aja mee ite mmanụ na mmanụ.
Saute yabasị. Tinye ntụ ọka na butter na mee roux . Tinye broth na Guinness biya ntakịrị na oge.
Simmer ruo mgbe atụrụ dị nro (ihe dị ka nkeji 90)
Add carrots & nduku na esi nri ruo mgbe obi. Thicken ọzọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ.
Jide n'aka na ihichapu agba aja aja na ala nke pan mgbe agba aja aja na nwa atụrụ. Nke a na-agbakwunye ọtụtụ ekpomeekpo! Enwere ike ịme achịcha atụrụ na oven na 325 degrees.
Ihe Ije Ozi na Nwa atụrụ
Nri na-enye obi ụtọ ma na-enye obi ụtọ n'onwe ya, nri atụrụ adịghị mkpa, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla dị n'akụkụ ya. A na-enyekarị atụrụ atụrụ Nduku Nduku . Ọ bụrụ na ọ ga-amasị gị, tinye stew nke a na obere ude nke curry iji tinye obere okpomọkụ.
Achịcha obi Achịcha Soda Irish ma ọ bụ sie, oyi na-atụ nke sauerkraut ma ọ bụ ọbụna arụrụ n'ụlọ bụ ezigbo ekpomeekpo nke akụkụ a siri ike, nke nwere obi ụtọ. Jiri pint (ma ọ bụ abụọ) nke Guinness Beer dị nkọ na-ejere ya ozi iji kwe nkwa na onye ọ bụla ga-enwe ntakịrị o ’Ọdụdọ ndị Irish mgbe ha bịara na tebụl!
Stew Irish, ma ọ bụ Guinness Stew, bụ ihe a na-eme kwa afọ n'oge ọnwa Machị, ọkachasị na ụbọchị St. Patrick, mgbe anya ndị Irish na-amụmụ ọnụ ọchị, onye ọ bụla dịkwa njikere maka nri obi! Otú ọ dị, efere a dị ezigbo ụtọ, ị ga-achọ ime ya kwa afọ!
Nri Esi nri Ọhụrụ
Ọkụkọ ọkụkọ - uzommeputa ọkacha mmasị!
Ọsọ ite ite anụ
Ofe Hamburger dị mfe - Na-ewu ewu!
Creamy azụ mmiri Chowder
Nri ọka bali - 5 kpakpando uzommeputa!
4.89site na9votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebeiri na ise Nkeji Oge nri1 aka elekere 40 Nkeji Oge zuru ezu1 aka elekere Ogbe 55 Nkeji Ọrụ4 servings Onye edemedeHolly Nilsson Nwa atụrụ Nwa atụrụ nke Irish bụ ihe oriri kwa afọ n'oge ọnwa Machị, mana ọ tọrọ ụtọ, ị ga-achọ ịnụ ụtọ ya n'afọ niile! Bipute Ntụtụ
▢abụọ paụnd atụrụ atụrụ ubu bee n'ime 1 ½ 'iberibe
▢nnu & ose
▢abụọ tablespoons mmanụ ihe oriri ekewa
▢1 buru ibu yabasị sliced
▢1 kalama Guiness biya
▢3 karọt gbanye n'ime 3 'iberibe
▢abụọ buru ibu nduku banyere 1 ½ pound
▢abụọ Ogwu thyme ma ọ bụ ½ teaspoon Fikiere
▢¼ iko pasili
Oge atụrụ na nnu na ose. Kpoo mmanu mmanu 1 n'ime oku na nwa aturu na obere ogbe.
Debe nwa aturu ma tinye yabasị na ite ya na mmanu ozo. Esi nri ruo mgbe obi dị nro, ihe dị ka nkeji 5.
Tinye ihe dị ka ofe tablespoons abụọ iji deglaze ma kpochapụ aja aja ọ bụla na ala. Esi nri ruo mgbe efere ga-apụ.
Tinye bọta na ntụ ọka. Esi nri otu nkeji. Tụgharịa okpomọkụ ka ọ dị ala. Tinye biya ma ofe obere ego n'otu oge agwakọta ruo mgbe ị ga-eji ire ụtọ mgbe mgbakwunye ọ bụla. Ngwakọta ahụ ga-adị ka ihe gara aga ma buru ibu na mbụ. Gaa n'ihu na-agbakwunye mmiri mmiri ntakịrị ntakịrị ruo mgbe ọ ga-eji ire ụtọ.
Tinye nwa aturu laghachi na post ma kpoo 90 nkeji ma obu rue mgbe aturu di nro. Add poteto, carrots na thyme na simmer 25 nkeji ma ọ bụ ruo mgbe obi.
Bido na pasili ma jee ozi na Achịcha Soda Irish.
To Thicken: Ọ bụrụ n ’ị ga-ahọrọ stewị buru ibu, jikọta achịcha ọka tablespoons 2 na mmiri mmiri mmiri abụọ. Tinye na esi esi obere obere oge ka ị na-akpali akpali ruo mgbe ọ ruru okike achọrọ.
Calorisị:Ugbo 537,Carbohydrates:37g,Protein:39g,Abụba:24g,Abụba Ajuju:14g,Cholesterol:106mg,Sodium:645mg,Potassium:1896mg,Eriri:6g,Sugar:3g,Vitamin A:8160IU,Vitamin C:32.3mg,Calcium:Ogbe 105mg,Iron:9.2mg
IsiokwuStew Irish N'ezieNtinye, Ofe Esie yaOnye America, IrishEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .